७३७ म्याक्सको फिर्तिपछि पनि बोइङले चीन बिक्रीको खडेरी सामना गर्ने «
७३७ म्याक्सको फिर्तिपछि पनि बोइङले चीन बिक्रीको खडेरी सामना गर्ने
प्रकाशित मिति : मंसिर ७, २०७७ आईतबार
RENTON, WA – NOVEMBER 13: A worker walks byaBoeing 737 Max airplane as it sits parked at the company’s Renton production facility on November 13, 2020 in Renton, Washington. Boeing has announced new cancellations of orders of the plane as it readies for approval to fly it again. (Photo by David Ryder/Getty Images)
हङकङ-अन्ततः बोइङले ७३७ म्याक्सलाई अमेरिकी आकासमा फिर्ता ल्याउन सहमती पाएपनि चिनियाँ उड्डयन बजारमा भने उसको भविष्य अझै अन्यौल छ ।
चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासन (सीएएसी) ले अझैपनि ७३७ म्याक्सलाई उसको मुलुकमा यात्रु ओसार्नका लागि अनुमती दिन बाँकिनै छ । अमेरिकी सरकार बोइङको अवरोध हटाउन महत्वपूर्ण मानिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरुमा उडान भर्नु अगाडि अन्य उड्डयन नियामकहरुको स्वीकृति आवश्यक छ ।
युरोपेली संघको उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीले डिसेम्बरको अन्त्य वा २०२१ को सुरुमा कदम चाल्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर, यसमा चीनको संकेत भने संवेदनशील देखिएको छ । चीनले गत वर्ष ७३७ म्याक्सलाई ग्राउन्डेड गरेको थियो । सीएएसीले गत महिना बोइङको विमानले उडान गर्न बोइङले पुरा गर्नु पर्ने मापदण्डको बारेमा आपूm सन्तुष्ट हुनुपर्ने जनाएको थियो । यसमा विमानको ढाँचामा गरिएको परिवर्तन जुन सुरक्षित र विस्वसनीय हुन्ुपर्ने विषय आश्वस्त हुनुपर्ने विषय समावेश छ ।
“उनीहरुले मापदण्ड पुरा भएको पाएसँगै हामी उनीहरुले उडान पुनः सुरु गरेको हेर्न पाउदा खुसी हुनेछौ,” सीएएसीका निर्देशक फेङ झेङग्लिनले बताए ।